Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှိုလုပ်ခြင်း,အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ၏မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း,အကြီးစားအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ
အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ၏မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများကိုမှို, အကြီးစားမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများများအတွက်မှို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးပိုတောင်းဆိုမှုများဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာမှိုကုန်ထုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများဒါပေမယ့်လည်း R & D ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ဒီဇိုင်းကိုသာဖြစ်ပါတယ်။ အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ၏ကြီးမားသောမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုအနေနဲ့မော်တော်ယာဉ်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုအဘို့သင့်လျော်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောမော်တော်ကား shell ကို, မော်တော်ကားအချက်အချာနှင့်ဝင်ပေါက်ကင်အဖြစ်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်း၏မှိုအမျိုးအစားများ, ဘုံမှိုနှင့်ပူပြေးသမားမှိုရှိနိုင်ပါသည်။ ဖောက်သည်ရဲ့ဝယ်လိုအားအရကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဒီဇိုင်းဌာနကအင်ဂျင်နီယာသေဆုံးပြီးတော့မှို၏ 3D ပုံကိုဒီဇိုင်းနှင့်။ အဆိုပါဦးစီးဌာနကို 3D ပုံအရသိရသည်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။ မှိုသန္ဓေသားကိုပြီးစီးခဲ့သည်နောက်, ထုတ်လုပ်မှုဦးစီးဌာနစမ်းသပ်ထုတ်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးမမှန်ကန်ကြောင်းရာအရပျရှိလျှင်, မှိုအင်ဂျင်နီယာဌာနကပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီဇိုင်းကနေ 15-30 နေ့ရက်ကိုအချိန်ပြီးစီးဖို့မှို၏အရည်အသွေးအတည်ပြုနိုင်ရန်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဌာနစမ်းသပ်နမူနာအားဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုပြီးနောက်, မှိုတစ်ပွညျ့စုံထုတ်လုပ်မှုထုတ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခုကြီးမားတဲ့မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုဒေသများ, 10 မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုအုပ်စုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလူ 150 ရဲ့မှိုဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းနှစ်ခုမှိုအင်ဂျင်နီယာဌာနနှစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဌာန, အမိန့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေး၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရှိပါတယ်။
Ruizhun Precision သတ္တု Co. , Ltd မှ။ အော်တို tool ကိုမှို, မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ဆေးထိုးတန်ဆာနှင့်အခြားအပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှုများ ချ. သေဆုံး, Semi-အစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းအထူးရိုးရာသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း။ 120 သန်း၏မှတ်ပုံတင်မြို့တော်ဂွမ်ဒေါင်းရဲ့သော့ချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတရုတ်နိုင်ငံ၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းများသို့တီထွင်နှင့်လွတ်လပ်သောသွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်၏ညာဘက်ရှိပါတယ်သိရသည်။
အဆိုပါစက်ရုံဖြစ်ပါတယ် Dongguan စီးတီး Ruizhun Precision သတ္တု Co. , Ltd မှ (RZ) 70000 စတုရန်းမီတာဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်း။ 800 ထုတ်လုပ်မှုလုပ်သားများနှင့် 150 မန်နေဂျာနှင့်အတူ, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်မြင့်မားသောတိကျဆေးထိုးတန်ဆာစက် 90. ချ. သေဆုံးအထူးသဖြင့်အဘို့, 101 တင်သွင်းမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း semisolid ချ. စက်တွေသေဆုံးရှိတယ်အဲဒါပေး, တရုတ်အကြီးဆုံးမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းတစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ထိရောက်နှင့်အဆင့်မြင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ဝန်ဆောင်မှု ချ. သေဆုံးလျက်ရှိသည်။
B ကစက်ရုံ Fenggang, Dongguan မြို့တွင်တည်ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးမှို Co. , Ltd (ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း) 10000 စတုရန်းမီတာဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်း။ ဆေးထိုးတန်ဆာစက်တွေ၏ 30 အစုံ, 10 မှိုကုန်ထုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်အုပ်စု, ဆေးထိုးတန်ဆာအတွေ့အကြုံ 15 နှစ်ရှိသည်။ ဒါဟာပလပ်စတစ်တန်ဆာများနှင့်မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။
Ruizhun Precision သတ္တု Co. , Ltd မှ။ , နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဂရုစိုကျ 100 နီးပါးကလူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ R & D အဖွဲ့သည်ရှိပါတယ်, 18 စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုမူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်းနှင့် R & D အဖွဲ့သည်တစ်စုံလင်သောထုတ်ကုန်သို့ဖောက်သည်ရဲ့စိတ်ကူးလှည့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်း BSI certified ရရှိထားပြီး ISO9001 မှတစ်ဆင့်: 2008, ISO14001: 2004 နှင့် TS16949 အရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, ကုမ္ပဏီမြင့်မားတဲ့စံနှုန်းစစ်ဆေးရေးတူရိယာများနှင့်စက်ကိရိယာများတပ်ဆင်ထားတဲ့ရင့်ကျက်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းဓာတ်ခွဲခန်းရှိပါတယ်။ ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးဖောက်သည်၏ထုတ်ကုန်များ၏သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုအရသိရသည်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးသေချာစေရန်အာမခံနိုင်ပါတယ်။ ရှစ်ဖြစ်စဉ်များစက်ရုံဧရိယာထဲမှာပြီးစီးခဲ့နေကြတယ်, တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်စဉ်ကိုတက်အတိုင်းလိုက်နာရန်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသူတစ်ဦးရှိပါတယ်, အမြဲတမ်းထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်ဖောက်သည်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဖောက်သည်နမူနာအတည်ပြုခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ကုမ္ပဏီများအမြောက်အများနှင့်ပို့ကုန်အတွက်သူတို့ကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။